HRC တှငျ ပွောကွသညျ့ ဂုဏျရညျလေးပါး အကွောငျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
HRC တှငျ ပွောကွသညျ့ ဂုဏျရညျလေးပါး အကွောငျး
HRC တွင် ပြောကြသည့် ဂုဏ်ရည်လေးပါး အကြောင်း
ဒီကနေ့ဟာ တပ်မတော်နေ့ လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက် မတ်လ (၂၅) ရက်နေ့က ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမျက်တောင်ရွာက ကူးတို့လှေသမား ကိုမောင်ချေ ကို မြန်မာစစ်တပ်ဟာ မျက်လုံးအစုံများစွာတို့ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ပစ်သတ် လိုက်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်ပွဲမှာ တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ စစ်ပြိုင်ဖက် ရန်သူကို သေစေတာ နဲ့ လူသတ်မှုကျူးလွန်တာဟာ မတူဘူး ဆိုတာ ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တိုက်ခိုက်ရေးသမားတိုင်း ကောင်းစွာ နားလည်ကြရမယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ရသေ့တောင် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးခင်မောင်လတ်က ဒီကေ့စ်ကို ရဲမှာ အမှုဖွင့်ဖို့ လုပ်နေတယ် လို့ ကြားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မနေ့ကဆိုရင် အလားတူပဲ မင်းပြားမြို့နယ်ထဲမှာ အရပ်သားစက်လှေကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး မေးမြန်းစစ်ဆေးမှု လုပ်တဲ့အတွက် အပြစ်မဲ့ အရပ်သား ဒဏ်ရာရပြန်တယ်။
စစ်တိုက်တာနဲ့ လူသတ်တာ သဘောချင်း မတူပါဘူး။ ရန်သူကို သေအောင်လုပ်တာ နဲ့ အရပ်သားအပေါ် လူသတ်မှုကျူးလွန်တာတို့ မတူကွဲပြားတာကို မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေကြတဲ့ကိစ္စ ဟာ “ဖြတ်လေးဖြတ်စိတ်သဘောထား” (four cuts mentality) ကနေလာတယ် လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဖြတ်လေးဖြတ်စိတ်သဘောထား ဆိုတာကလည်း အခုမှ ဖြစ်တည်လာတာ မဟုတ်ဘဲ ၁၉၆၀ ကျော် လောက်ကတည်းက စုဖွဲ့ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ စုပေါင်း စိတ်နေသဘောထား တစ်ရပ်ကို မျိုးဆက် အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အခုခေတ်မှာ ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကို ပိုဖြစ်စေလိမ့်မယ် ဆိုတာကို ကျူးလွန်သူတွေ နားလည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေကြပုံ ပေါ်ပါတယ်။
အရင့်အရင် စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ဖြတ်လေးဖြတ်ကို အလုပ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို ဒီနေရာမှာတော့ မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ (စကားလုံး ရွေးပြီး သက်သက်ညှာညှာပြောရရင်) ဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ် ဧရာမ ကြီးစွာသော သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေအောင် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ကျူးလွန်သူတွေဟာ သူ့အလိုလိုနေတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို ရန်သူအားပေးတွေ (တစ်နည်းအားဖြင့် ရန်သူတွေ) လို့ မြင်တဲ့ အမြင်ဟာ ပဲခူရိုးမ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် အစရှိတဲ့ ဖြတ်လေးဖြတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးရာ ဒေသတိုင်းမှာ ရှိခဲ့ကြတယ်။
အဲသည်အမြင်ကနေ အရပ်သားတွေဆီ ကျည်ဆန်တွေ လာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလထဲမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ (Human Rights Council) ရဲ့ ၃၉-ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို (တာဝန်ပေးခံထားရတဲ့) လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်း က တင်သွင်းပါတယ်။ (ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဖြစ်ရပ်တွေ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး အဲသည် အစီရင်ခံစာကို ရေးသားတာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။)
မြန်မာ့တပ်မတော်က ပြုလုပ်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေ ရဲ့ ဂုဏ်ရည်လေးရပ်ကို အဲသည် အစီရင်ခံစာမှာ တင်ပြထားတာ တွေ့ပါတယ်။ အဲသည် ဂုဏ်ရည်လေးရပ် ကတော့ –
(က) အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း၊ (targeting of civilians)
(ခ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၊ (sexual violence)
(ဂ) ဖယ်ထုတ်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြောဆိုမှုများ၊ (exclusionary rhetoric)
(ဃ) ပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်နေမှု၊ (impunity) – တို့ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်တဲ့ အစီရင်ခံစာက ပြောတာ၊ ကျွန်တော် ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ အဲသည်လေးချက်ထဲမှာ အချက် (က) နဲ့ (ခ) ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အချက် (ဂ) က သူတို့/ငါတို့ ခွဲခြားတဲ့ သဘောတရား တည်ဆောက်တာကို ဆိုလိုတယ် လို့ အကြမ်းဖျင်း အလွယ်ပြောနိုင်ပြီးတော့ အချက် (ဃ) ကတော့ အပြစ်ကျူးလွန်ပေမယ့် ပြစ်ဒဏ်မကျနိုင်တာ ကျူးလွန်ခွင့်လိုင်စင်ရသလို ဖြစ်နေတာကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်လေးချက်အနက်မှာ ပထမဆုံးချက် ဖြစ်တဲ့ “အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း” ဆိုတဲ့အချက်ကို အစီရင်ခံစာမှာ ပါတဲ့အတိုင်း စာရှုသူများ ဖတ်နိုင်အောင် မြန်မာလို နဲ့ အင်္ဂလိပ်လို လက်ဆင့်ကမ်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဆိုမှုကတော့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုချက်အတိုင်း ၏သည်မလွဲ ပြန်ကူး တင်ပြ ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ဖြတ်လေးဖြတ်အစား ပင်လုံအခြေခံနဲ့ တည်ဆောက်ကြဖို့ကို တိုင်းရင်းသားများက ယနေ့ထက်ထိ မျှော်လင့်ချက်ထားနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၉ မတ်လ (၂၇) ရက်
[ – – – စ – – – ]
“(၅) တပ်မတော်စစ်ဆင်ရေး၏ ထူးခြားသိသာသော လက္ခဏာများ
၇၅။ မစ်ရှင်းသည် ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြသော တပ်မတော် စစ်ဆင်ရေးများ၏ အဓိက သိသာသော ပင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာ (၄) ချက်ကို အလေးထားဖော်ပြလိုက်သည်။
(က) အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း
၇၆။ စစ်တပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသား ချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေပါ အခြေခံမူများဖြစ်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများတွင် အရပ်သားများကို ခွဲခြား၍ ရှောင်ရန်၊ လိုအပ်သည်နှင့် အသုံးပြုသည့် အင်အား အချိုးကျစေရန် နှင့် အရပ်သားများ မတော်တဆ ထိခိုက်သေဆုံးခြင်းတို့ မရှိစေဖို့ ကြိုတင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် စသည်တို့ကို လေးစားလိုက်နာခြင်း အမြဲလိုလို မရှိခဲ့ပေ။ တပ်မတော်၏ မူဝါဒများ၊ နည်းဗျူဟာများနှင့် အပြုအမူတို့တွင် အရပ်သားများကို တမင် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခြင်း ပါဝင်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ချီ၍ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ (၁၉၆၀) ပြည့်လွန်နှစ်များက စတင်ခဲ့သော “ဖြတ်လေးဖြတ်” မူဝါဒကို ယခုတိုင် ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သည်။ “ဖြတ်လေးဖြတ်” မူဝါဒတွင် အစိုးရမဟုတ်သော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအား အစားအစာအရင်းအမြစ်၊ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်၊ သတင်းအချက် အလက်အရင်းအမြစ် နှင့် ဒေသခံအရပ်သားများထံမှ လူအင်အား အရင်းအမြစ်တို့ ဆက်လက် မရရှိစေရန် ဖြတ်တောက်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းမူဝါဒကို “ရှင်းလင်း စစ်ဆင်ရေး”များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ရန်သူများအား အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးသုတ်သင်သော စစ်ဆင်ရေးများ ဖြစ်ပြီး၊ အရပ်သားများအား သတ်ဖြတ်ကာ ရွာလုံးကျွတ်အား ဖျက်ဆီးကြသောကြောင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
၇၇။ ဤမူဝါဒများနှင့် အပြုအမူများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလက်အောက်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ မဖြစ်မနေ တာဝန်ရှိသော ဝတ္တရားများကို ချိုးဖောက်ရာကျပြီး၊ ရာဇဝတ်မှုများ အရာရောက်သည်။ ၄င်းတို့အား လုပ်စရာလည်း မလိုပါ။ စစ်ဆင်ရေးအရ လိုအပ်ချက်သည် ဘယ်သောအခါမှ မခွဲခြားဘဲ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို အုပ်စုဖွဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များကို တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ရန်မလိုပါ။ တပ်မတော်၏ နည်းဗျူဟာများသည် အမြဲတမ်းလိုလို၊ အမှန် တကယ်ရှိသည့် လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များထက် အဆမတန် အင်အားကြီးမားလှသည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ရပ် များကို ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် အထူးသဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင်လည်း အလားတူ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသည်။
၇၈။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များရှိ များစွာသော တိုင်းရင်းသား အုပ်စု များမှ အရပ်သားများအပေါ် တပ်မတော်၏ ချိုးဖောက်မှုများကို အကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားသော်လည်း၊ တပ်မတော် အနေနှင့် လူ့အသက်၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်တို့ကို မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဆိုလျှင် လုံးဝဂရုမစိုက်ခြင်းတို့မှာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ လူထုအားလုံးအတွက် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်သည်။ ဤပြည်နယ် (၃)ခု ပြင်ပရှိ ဒေသများမှ ထွက်ပြေး လာကြသော ဒုက္ခသည် အရေအတွက် အများအပြား ရှိနေခြင်းသည် အလားတူ လူ့အခွင့်အရေး အပေါ် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ရပ်များ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သက်သေခံလျက်ရှိသည်။”
[ – – – ဆုံး – – – ]
[ – – – begin – – – ]
A. Targeting of civilians
76. The military has consistently failed to respect international human rights law and the international humanitarian law principles of distinction, proportionality and precaution. The deliberate targeting of civilians has been part of Tatmadaw policies, tactics and conduct for decades. The “Four Cuts” counterinsurgency policy, initiated in the 1960s and still implemented, is aimed at cutting off non-State armed groups from access to food, finances, intelligence, and recruits from the local civilian population. The policy has been implemented through “clearance operations”, essentially scorched earth campaigns in which civilians are killed and entire villages destroyed, leading to mass displacement.
77. Such policies and practices violate the State’s obligations under international law and amount to criminal conduct. They are also unwarranted; military necessity would never justify killing indiscriminately, gang-raping women, assaulting children and burning entire villages. The tactics used by the Tatmadaw are consistently and grossly disproportionate to actual security threats, especially in Rakhine State, but also in northern Myanmar.
78. While the mission outlines in the present report the violations against civilians from many ethnic groups in Kachin, Rakhine and Shan States, the contempt shown by the Tatmadaw for human life, integrity and freedom, and for international law generally, should be of concern to the entire population. The number of refugees from areas outside these three States attests to the existence of similar human rights concerns elsewhere in the country.
[ – – – end – – – ]
ဒီကနဟေ့ာ တပျမတျောနေ့ လို့ ဆိုပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈရကျ မတျလ (၂၅) ရကျနကေ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အမကျြတောငျရှာက ကူးတို့လှသေမား ကိုမောငျခြေ ကို မွနျမာစဈတပျဟာ မကျြလုံးအစုံမြားစှာတို့ရဲ့ ရှမှေ့ောကျမှာ ပဈသတျ လိုကျတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ စဈပှဲမှာ တိုကျခိုကျရငျးနဲ့ စဈပွိုငျဖကျ ရနျသူကို သစေတော နဲ့ လူသတျမှုကြူးလှနျတာဟာ မတူဘူး ဆိုတာ ဟာ ပရျောဖကျရှငျနယျ တိုကျခိုကျရေးသမားတိုငျး ကောငျးစှာ နားလညျကွရမယျ့ ကိစ်စဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ရသတေ့ောငျ အမြိုးသားလှတျတျောအမတျ ဦးခငျမောငျလတျက ဒီကစျေ့ကို ရဲမှာ အမှုဖှငျ့ဖို့ လုပျနတေယျ လို့ ကွားပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ မနကေ့ဆိုရငျ အလားတူပဲ မငျးပွားမွို့နယျထဲမှာ အရပျသားစကျလှကေို သနေတျနဲ့ပဈပွီး မေးမွနျးစဈဆေးမှု လုပျတဲ့အတှကျ အပွဈမဲ့ အရပျသား ဒဏျရာရပွနျတယျ။
စဈတိုကျတာနဲ့ လူသတျတာ သဘောခငျြး မတူပါဘူး။ ရနျသူကို သအေောငျလုပျတာ နဲ့ အရပျသားအပျေါ လူသတျမှုကြူးလှနျတာတို့ မတူကှဲပွားတာကို မရှငျးမလငျး ဖွဈနကွေတဲ့ကိစ်စ ဟာ “ဖွတျလေးဖွတျစိတျသဘောထား” (four cuts mentality) ကနလောတယျ လို့ဆိုရပါလိမျ့မယျ။ ဖွတျလေးဖွတျစိတျသဘောထား ဆိုတာကလညျး အခုမှ ဖွဈတညျလာတာ မဟုတျဘဲ ၁၉၆၀ ကြျော လောကျကတညျးက စုဖှဲ့ဖွဈတညျလာခဲ့တဲ့ စုပေါငျး စိတျနသေဘောထား တဈရပျကို မြိုးဆကျ အဆကျဆကျ လကျဆငျ့ကမျးလာခဲ့ပုံရပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးဟာ အခုခတျေမှာ ဒီနှဈပိုငျးတှမှော ကောငျးကြိုးထကျ ဆိုးကြိုးကို ပိုဖွဈစလေိမျ့မယျ ဆိုတာကို ကြူးလှနျသူတှေ နားလညျနိုငျဖို့ ခကျခဲနကွေပုံ ပျေါပါတယျ။
အရငျ့အရငျ စဈဆငျရေးတှမှော ဖွတျလေးဖွတျကို အလုပျဖွဈအောငျ ဘယျလိုလုပျခဲ့ကွတယျဆိုတာကို ဒီနရောမှာတော့ မဆှေးနှေးတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဖွတျလေးဖွတျလုပျဆောငျတဲ့အခါ (စကားလုံး ရှေးပွီး သကျသကျညှာညှာပွောရရငျ) ဒသေခံပွညျသူလူထုအပျေါ ဧရာမ ကွီးစှာသော သကျရောကျမှုတှေ ဖွဈစအေောငျ လုပျခဲ့ကွတယျ။ ဒီလို သကျရောကျမှုတှဖွေဈအောငျလုပျတဲ့ ကြူးလှနျသူတှဟော သူ့အလိုလိုနတေဲ့ ဒသေခံပွညျသူတှကေို ရနျသူအားပေးတှေ (တဈနညျးအားဖွငျ့ ရနျသူတှေ) လို့ မွငျတဲ့ အမွငျဟာ ပဲခူရိုးမ၊ ကရငျပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ၊ ကခငျြပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျ အစရှိတဲ့ ဖွတျလေးဖွတျ လုပျဆောငျခဲ့ဖူးရာ ဒသေတိုငျးမှာ ရှိခဲ့ကွတယျ။
အဲသညျအမွငျကနေ အရပျသားတှဆေီ ကညျြဆနျတှေ လာနတော ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ စကျတငျဘာလထဲမှာ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီ (Human Rights Council) ရဲ့ ၃၉-ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးမှာ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ပတျသကျတဲ့ အစီရငျခံစာတဈစောငျကို (တာဝနျပေးခံထားရတဲ့) လှတျလပျသော နိုငျငံတကာ အခကျြအလကျ ရှာဖှရေေးမဈရှငျး က တငျသှငျးပါတယျ။ (ကခငျြပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ နဲ့ ရခိုငျပွညျနယျက ဖွဈရပျတှေ အခကျြအလကျတှကေို အခွခေံပွီး အဲသညျ အစီရငျခံစာကို ရေးသားတာ ဖွဈတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။)
မွနျမာ့တပျမတျောက ပွုလုပျတဲ့ စဈဆငျရေးတှေ ရဲ့ ဂုဏျရညျလေးရပျကို အဲသညျ အစီရငျခံစာမှာ တငျပွထားတာ တှပေ့ါတယျ။ အဲသညျ ဂုဏျရညျလေးရပျ ကတော့ –
(က) အရပျသားမြားကို ပဈမှတျထားခွငျး၊ (targeting of civilians)
(ခ) လိငျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှု၊ (sexual violence)
(ဂ) ဖယျထုတျလိုသော ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ပွောဆိုမှုမြား၊ (exclusionary rhetoric)
(ဃ) ပွဈဒဏျမှကငျးလှတျနမှေု၊ (impunity) – တို့ ဖွဈတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါဟာ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီကိုတငျတဲ့ အစီရငျခံစာက ပွောတာ၊ ကြှနျတျော ပွောတာ မဟုတျပါ။ အဲသညျလေးခကျြထဲမှာ အခကျြ (က) နဲ့ (ခ) ကတော့ ရှငျးပါတယျ။ အခကျြ (ဂ) က သူတို့/ငါတို့ ခှဲခွားတဲ့ သဘောတရား တညျဆောကျတာကို ဆိုလိုတယျ လို့ အကွမျးဖငျြး အလှယျပွောနိုငျပွီးတော့ အခကျြ (ဃ) ကတော့ အပွဈကြူးလှနျပမေယျ့ ပွဈဒဏျမကနြိုငျတာ ကြူးလှနျခှငျ့လိုငျစငျရသလို ဖွဈနတောကို ပွောတာ ဖွဈပါတယျ။
အဲသညျလေးခကျြအနကျမှာ ပထမဆုံးခကျြ ဖွဈတဲ့ “အရပျသားတှကေို ပဈမှတျထားခွငျး” ဆိုတဲ့အခကျြကို အစီရငျခံစာမှာ ပါတဲ့အတိုငျး စာရှုသူမြား ဖတျနိုငျအောငျ မွနျမာလို နဲ့ အင်ျဂလိပျလို လကျဆငျ့ကမျး တငျပွလိုကျပါတယျ။ ဘာသာပွနျဆိုမှုကတော့ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးရဲ့ ဘာသာပွနျဆိုခကျြအတိုငျး ၏သညျမလှဲ ပွနျကူး တငျပွ ပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
စဈမှနျတဲ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုကို ဖွတျလေးဖွတျအစား ပငျလုံအခွခေံနဲ့ တညျဆောကျကွဖို့ကို တိုငျးရငျးသားမြားက ယနထေ့ကျထိ မြှျောလငျ့ခကျြထားနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၉ မတျလ (၂၇) ရကျ
“(၅) တပျမတျောစဈဆငျရေး၏ ထူးခွားသိသာသော လက်ခဏာမြား
၇၅။ မဈရှငျးသညျ ကခငျြ၊ ရခိုငျနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျတို့တှငျ ဖွဈပှားခဲ့ကွသော တပျမတျော စဈဆငျရေးမြား၏ အဓိက သိသာသော ပငျကိုစရိုကျလက်ခဏာ (၄) ခကျြကို အလေးထားဖျောပွလိုကျသညျ။
(က) အရပျသားမြားကို ပဈမှတျထားခွငျး
၇၆။ စဈတပျသညျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လူ့အခှငျ့အရေးဥပဒနှေငျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လူသား ခငျြး စာနာထောကျထားမှု ဥပဒပေါ အခွခေံမူမြားဖွဈသညျ့ တိုကျခိုကျမှုမြားတှငျ အရပျသားမြားကို ခှဲခွား၍ ရှောငျရနျ၊ လိုအပျသညျနှငျ့ အသုံးပွုသညျ့ အငျအား အခြိုးကစြရေနျ နှငျ့ အရပျသားမြား မတျောတဆ ထိခိုကျသဆေုံးခွငျးတို့ မရှိစဖေို့ ကွိုတငျကာကှယျစောငျ့ရှောကျရနျ စသညျတို့ကို လေးစားလိုကျနာခွငျး အမွဲလိုလို မရှိခဲ့ပေ။ တပျမတျော၏ မူဝါဒမြား၊ နညျးဗြူဟာမြားနှငျ့ အပွုအမူတို့တှငျ အရပျသားမြားကို တမငျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ပဈမှတျထားခွငျး ပါဝငျခဲ့သညျမှာ ဆယျစုနှဈခြီ၍ ကွာခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ (၁၉၆၀) ပွညျ့လှနျနှဈမြားက စတငျခဲ့သော “ဖွတျလေးဖွတျ” မူဝါဒကို ယခုတိုငျ ကငျြ့သုံးဆဲဖွဈသညျ။ “ဖွတျလေးဖွတျ” မူဝါဒတှငျ အစိုးရမဟုတျသော လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့မြားအား အစားအစာအရငျးအမွဈ၊ ငှကွေေးအရငျးအမွဈ၊ သတငျးအခကျြ အလကျအရငျးအမွဈ နှငျ့ ဒသေခံအရပျသားမြားထံမှ လူအငျအား အရငျးအမွဈတို့ ဆကျလကျ မရရှိစရေနျ ဖွတျတောကျရေးတို့ ပါဝငျသညျ။ ၎င်းငျးမူဝါဒကို “ရှငျးလငျး စဈဆငျရေး”မြားဖွငျ့ အကောငျအထညျဖျောခဲ့ကွသညျ။ ရနျသူမြားအား အထောကျအကူပွုနိုငျသညျ့ အရာအားလုံးကို ဖကျြဆီးသုတျသငျသော စဈဆငျရေးမြား ဖွဈပွီး၊ အရပျသားမြားအား သတျဖွတျကာ ရှာလုံးကြှတျအား ဖကျြဆီးကွသောကွောငျ့ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြား ဖွဈခဲ့ရသညျ။
၇၇။ ဤမူဝါဒမြားနှငျ့ အပွုအမူမြားသညျ အပွညျပွညျဆိုငျရာဥပဒလေကျအောကျတှငျ မွနျမာ နိုငျငံ၏ မဖွဈမနေ တာဝနျရှိသော ဝတ်တရားမြားကို ခြိုးဖောကျရာကပြွီး၊ ရာဇဝတျမှုမြား အရာရောကျသညျ။ ၄ငျးတို့အား လုပျစရာလညျး မလိုပါ။ စဈဆငျရေးအရ လိုအပျခကျြသညျ ဘယျသောအခါမှ မခှဲခွားဘဲ သတျဖွတျခွငျး၊ အမြိုးသမီးမြားကို အုပျစုဖှဲ့မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး၊ ကလေးသူငယျမြားကို တိုကျခိုကျခွငျးနှငျ့ ရှာလုံးကြှတျမီးရှို့ခွငျးတို့ကို လုပျရနျမလိုပါ။ တပျမတျော၏ နညျးဗြူဟာမြားသညျ အမွဲတမျးလိုလို၊ အမှနျ တကယျရှိသညျ့ လုံခွုံရေးအန်တရာယျမြားထကျ အဆမတနျ အငျအားကွီးမားလှသညျ။ ထိုကဲ့သို့ လုပျရပျ မြားကို ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးတှငျ အထူးသဖွငျ့ ကြူးလှနျခဲ့ကွပွီး၊ မွနျမာနိုငျငံ မွောကျပိုငျးတှငျလညျး အလားတူ ဖွဈပျေါခဲ့ကွသညျ။
၇၈။ ဤအစီရငျခံစာတှငျ ကခငျြ၊ ရခိုငျနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျမြားရှိ မြားစှာသော တိုငျးရငျးသား အုပျစု မြားမှ အရပျသားမြားအပျေါ တပျမတျော၏ ခြိုးဖောကျမှုမြားကို အကဉျြးခြုံးဖျောပွထားသျောလညျး၊ တပျမတျော အနနှေငျ့ လူ့အသကျ၊ လူ့ဂုဏျသိက်ခာ နှငျ့ လှတျလပျခှငျ့တို့ကို မထီမဲ့မွငျပွုခွငျး၊ ယဘေုယအြားဖွငျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဥပဒဆေိုလြှငျ လုံးဝဂရုမစိုကျခွငျးတို့မှာ မွနျမာ တဈနိုငျငံလုံး ရှိ လူထုအားလုံးအတှကျ စိုးရိမျစရာ ဖွဈသညျ။ ဤပွညျနယျ (၃)ခု ပွငျပရှိ ဒသေမြားမှ ထှကျပွေး လာကွသော ဒုက်ခသညျ အရအေတှကျ အမြားအပွား ရှိနခွေငျးသညျ အလားတူ လူ့အခှငျ့အရေး အပျေါ စိုးရိမျစရာ ဖွဈရပျမြား မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးတှငျ ဖွဈပျေါနကွေောငျး သကျသခေံလကျြရှိသညျ။”
[ – – – ဆုံး – – – ]
V. Hallmarks of Tatmadaw operation
Previous အဖွူရောငျနယျမွရှေိ အမြားပွညျသူစီး စကျတပျမျောတျောမြားအား လကျနကျကိုငျတပျမြား၏ ချေါယူစဈဆေးမှုမြားအတှငျး သဆေုံးဒဏျရာရနကွေခွငျးကိစ်စ
Next V for verification
သီတာထှေးထိုးတဲ့ ခေါငျးလောငျးသံကို ဘယျနှနှဈကွာကွာ မမဖေို့ လိုတယျ
စံရှမေောငျ (သို့မဟုတျ) လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး-သုံး)